Shiinaha ROUNDBAR BOLT warshad iyo soosaarayaal | TRM
TRM waxay u heellan tahay samaynta badbaadada iyo alaabada taageerada dhulka ee aqoonta u leh codsiga ku jira miinada, tunnel -ka iyo jiirada iwm. Ka sokow nidaamka Split Set oo leh boodh iyo jaranjarooyin, waxaan sidoo kale bixinnaa boolal bir ah sida biraha wareega. Roundbar waa qalab bir ah oo aad u popluar ah oo suuqa ku jira iyo birta birta ah ayaa bixin karta wax badan oo kala duwan oo wareegsan oo fasal ah si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan iyadoo loo eegayo xaaladaha strata, caadiyan darajada bar -balka aan bixino waa Q235, Q345, 40Cr, 20MnSi IWM xalka si loogu xaliyo dhibaatadooda taageerida qiimo jaban. Ku marooji waxaa lagu farsameyn doonaa hal dhammaad oo suunka wareegsan iyo lowska ayaa lagu xirayaa biin ku dhejinaya balka, isla mar ahaantaana waxaan sidoo kale bixinnaa dhammaan lowska iyo makiinadaha dhaqa ee loo isticmaalo si wadajir ah boorarka wareega. Waxaan soo dhawaynaynaa macaamilka inay na siiyaan nashqadooda u gaarka ah lowska iyo dhaqeyaasha, waxaanan ku siin karnaa lowska iyo makiinadaha lagu sameeyo shubka, been abuurka iyo farsamaynta. Si looga caawiyo isku-darka kaabsoolada cusbada iyo samaynta boodhka wareega ayaa leh iska-caabbinta Anti-Shear ee waxqabadka taageerada, waxaan sidoo kale ku riixnaa xoogaa foomka “D” ah oo ay weheliyaan jirka barkadda wareegsan oo aan ugu yeernay “D-Bolt”, waxay leedahay wax badan waxqabadka wanaagsan ee mashaariicda taageerada. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa boodhka wareegsan madaxa been abuurka ah kaas oo aad ugu habboon in lagu isticmaalo codsiyada taageerada dhulka.
TILMAAMAHA BOLTKA ROUNDBAR
Darajooyin kala duwan oo wareegsan ayaa la heli karaa.
Madaxa been abuurka ah oo leh dun ama qolof ayaa la heli karaa.
nidaam taageero dhul oo fudud oo aan qaali ahayn.
Qalabyada sida maydhayaasha iyo lowska ayaa la heli karaa.
Waxaa la heli karaa kartoonkii cusbi.
1. Dalool leh dhexroor ku habboon cabbirka baarka ayaa laga qodi doonaa saqafka sare ee qiyaasta 25mm ka dheer qarka boodhka. Ka cabir meesha saxanku taabto saqafka ilaa xagga sare ee suunka.
2. Ku rid kartoomada raashinka godka. Dhererka iyo nooca cusbi sida ku qeexan qorshaha xakamaynta saqafka.
3. Iyada oo boolku ku jiro mareegaha boodhka, geli godka torque/xiisad godka ilaa meel saxanka saqafku ka yara durugsan yahay saqafka saqafka oo aan la saarin cadaadis kor u kac ah. Hadda si dhaqso ah ugu wareeji bool-haadka saacad-ka-wareeg ah 5-10 ilbidhiqsi (ama sida soo-saareyaasha soo-saareyaasha talooyinka nooca resin-ka la isticmaalayo) si loo hubiyo isku-dhafka saxarka. Mar walba gacmaha ka fogee qaybaha meerto.
4. Iminka meel ku dheg oo xidh xidhka (ha ku dabaqin xoog-kor-u-qaadis) ugu yaraan 10-30 ilbidhiqsi (taas oo ku xidhan hadba waxa la isticmaalo cusbi) si aad u oggolaato in xabagta si fiican u samaysato.
5. Ka dib marka uu cusbigu si fiican u dejiyo, ku wareeji shirarka suunka saacadda ugu hoosaysa adigoo hoos u riixaya dabkana ku dheji balka sida ku cad qorshaha xakamaynta saqafka miinada. tani waxay dhammaystirtaa rakibidda.
Xiga: BOOGTA THREADBAR
Miinada Roundbar Bolt
Roundbar Bolt Warshadda
Bixiyaha Roundbar Bolt